The X-Files: ရာသီသစ်မကြည့်မီ Netflix တွင်ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်စဉ်များ - တီဗီ
The X-Files: ရာသီသစ်ကိုမကြည့်ခင် Netflix ကိုကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်စဉ်များ
X Files Best Episodes Watch Netflix Before Watching New Season
Pee-wee ရဲ့အားလပ်ရက်အကြီးဆုံးနေ့နှင့်နောက်တွဲယာဉ် (ဗီဒီယို) 8 ၏ 8 Prev browse လုပ်ရန်သင်၏←→ (မြား) ကိုသုံးပါ
ရာသီ 6, အပိုင်း 2
Vince Gilligan ကရေးသားခဲ့သည်
မူရင်းထုတ်ပေးသည့်နေ့ - နိုဝင်ဘာ ၁၅၊ ၁၉၉၈
Drive သည်ဖြစ်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးသီးခြားဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည် အဆိုပါ X-Files နှင့်ငါ့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်စဉ်များတစ်ခု။
ကရေးသားခဲ့သည် ဆိုးဝါးစွာချိုးဖောက်ခြင်း 202 ၏ 29 ရေးသားခဲ့သည်သူကိုဖန်တီးသူ Vince Gilligan X-Files ဖြစ်ရပ်များသည်ဒတ်ခ်ျသည် Agent Mulder ကိုပြန်ပေးဆွဲပြီးအနောက်ကိုမောင်းထုတ်ရန်ဖိအားပေးသောပက်ထရစ် Crump (Bryan Cranston) ၏အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြသည်။ အေးဂျင့် Scully သည် Crump ၏အိမ်အောက်ရှိအချက်ပြမှုကိုသူ၏ခေါင်းပေါ်တွင်ဖိအားဖြစ်စေပြီး Crump ကိုအလွန်နာကျင်စေသည်။ အနောက်ကိုဂြိုဟ်တုတစ်လုံးဆီသို့မောင်းနှင်ခြင်းသည်နာကျင်မှုကိုသက်သာစေသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည် အေးဂျင့် Scully သည် Crump ကိုကယ်တင်ရန်ကြိုးစားသည်။ Mulder နှင့် Crump တို့သည်သူတို့ပြောသည့်အတိုင်း၊
Drive သည်အကောင်းဆုံးစာရင်းအားလုံးနီးပါးကိုပြုလုပ်သည် X-Files ဖြစ်စဉ်များ, ထိုသို့ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ပါပဲ။ အဆိုပါဇာတ်လမ်းတွဲအထူးသဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ပါတယ်နှင့်ငါတို့တကယ်ကြောင်းအမှတ်သည်အထိတက်မမြင်ရသောစီးရီးမှကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်စင်ဆောင်တတ်၏။
Vince Gilligan သည် Bryan Cranston ကိုအလွန်စိတ်စွဲမှတ်စေခဲ့ပြီး၎င်းအား Cranston အားလူကြိုက်အများဆုံးအခန်းကဏ္ Walter မှနေရာယူရန်သူ့ကိုမှုတ်သွင်းခဲ့သည်။ ဆိုးဝါးစွာချိုးဖောက်ခြင်း။
ငါ့ကိုရန်, ဒီ၏နောက်ဆုံးအကြီးအဖြစ်စဉ်များတစ်ခုဖြစ်သည် X-Files များ သော်လည်း။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲအပြီးနောက်ထပ်ရာသီသုံးခုနှင့်ရုပ်ရှင်သုံးခုရှိသေးသည်မှာသိသာထင်ရှားပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည် Drive တွင်ရှိသကဲ့သို့ကောင်းကောင်းမရခဲ့ပါ။ Plus အား, Bryan Cranston ဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်သရုပ်ဆောင်! ဒါကိုကျွန်ုပ်တို့ဘယ်လိုမချစ်နိုင်ခဲ့တာလဲ။
longmire ရာသီ5စတင်ရက်စွဲ netflix
ငါတို့သည်သင်တို့၏အကြိုက်ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲစွန့်ခွာခဲ့သလား အဆိုပါ X-Files ဒီစာရင်းလား ကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်ချက်များအပိုင်းအတွက်သိပါစေ 8 ၏ 8 Prev browse လုပ်ရန်သင်၏←→ (မြား) ကိုသုံးပါ
မူလစာမျက်နှာ Anime ဆက်သွယ်ရန်အကြောင်းဆက်ပြောသည်
2020 အကောင်းဆုံး7Netflix မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်
အဘယ်ကြောင့်အမေရိကန်ထိတ်လန့ပုံပြင်မဟုတ်: Netflix အပေါ် Roanoke သေး?
ယခုတနင်္ဂနွေတွင် Netflix တွင်ကြည့်ရှုရန်အတွက်ကောင်းသောရုပ်ရှင် ၅ မျိုး - Punisher နှင့်အခြားအရာများ
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Netflix တွင် Titan အပေါ်တိုက်ခိုက်မှုလား။
Riverdale သူတို့ရဲ့ Barchie ဆင်းသက်မှီဝဲ။ ဒီတစ်ခါလည်းစုံတွဲများအတွက်လာမယ့်ဘာလဲ
ပထမဆုံး Rocky ရုပ်ရှင် ၆ ခုသည်ယခု Hulu တွင်ဖြစ်သည်
Marvel ရဲ့ Doctor Strange ဟာ Netflix မှာဘယ်အချိန်မှာနေမလဲ။
Wentworth ရာသီ 10 ဖြစ်ပျက်ပါသလား
Kissing Booth2ထွက်ရှိမည့်နေ့ကိုမကြာမီကြေညာမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်
The Walking Dead online: Watch 9၊ ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁၀ တိုက်ရိုက်လွှင့်ခြင်းကိုကြည့်ပါ
နောက်ဆုံးပေါ်သတင်း Netflix, မူရင်းစီးရီး, ရုပ်ရှင်, တီဗီရှိုးများ, ဝေဖန်နှင့် Netflix နဲ့သစ်တွေ Edition မှာများအတွက်အကောင်းဆုံး Site ကို။
ရာသီ6အမေရိကန်ထိတ်လန့်ပုံပြင် netflix
သန်းခေါင်မှာဖြန့်ချိ netflix ပွဲများဖြစ်ကြသည်
ဘယ်အချိန်မှာရာသီ5netflix အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်
ဘယ်အချိန်မှာရာသီရာသီ 8 netflix အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်
Netflix မှာ Homefront ကဘာလဲ။
Anya Taylor-Joy ရဲ့အသားတင်တန်ဖိုး - Queen's Gambit ကြယ်ကဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိလဲ။
Walking Dead ရာသီ (၁၀) ပွဲသည်ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းအထိရွှေ့ဆိုင်းခဲ့သည်
Netflix ရှိအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅၀
၁၆ လိမ္မော်ရောင်သည်ကျွန်ုပ်တို့မုန်းတီးခြင်းကိုနှစ်သက်သော New Black ဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်
Copyright ©2021 All rights reserved | vivelverbindt.be | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ